Mpanamboatra lamba mpamatsy polyurethane mifono vy - China Polyurethane mifono ravin-kazo vita amin'ny lamba firakotra
Pu Polyester lamba
Pu Polyester Fabric dia lamba fiberglass nopetahany Polyurethane, ary akora mitambatra miaraka amina asa maro, ny famolavolana lamba vita amin'ny fiberglass mifono pu dia afaka mampifanaraka amin'ny toerana samihafa. Izy io dia manana faharetana, fahamafisana, fahalemena, loko mamirapiratra, fanoherana ambonin'akanjo, hatsiaka, solika, rano, fahanterana ary toetrandro. Izy io dia manana ny asan'ny bakteria fanoherana koa, ary azo ampiasaina amin'ny fanamarinana ny bobongolo, ny insulasi amin'ny hafanana ary ny anti-ultraviolet.
Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy
Pu Coated Fiberglass Fabric Cloth dia lamba fireproof vita amin'ny firakotra flame retardant polyurethane eo ambonin'ny lamba fiberglass miaraka amina teknolojia coating. Izy io dia manana rindrambaiko isan-karazany sy fiasa amin'ny fanoherana ny hafanana avo, insulation, fireproof, tantera-drano ary rivotra.
Lamba firakotra Pu mifono lasopy
Pu Coated Fiberglass Cloth dia lamba fireproof vita amin'ny firakotra flame retardant polyurethane eo ambonin'ny lamba fiberglass miaraka amina teknolojia coating. Izy io dia manana rindrambaiko isan-karazany sy fiasa amin'ny fanoherana ny hafanana avo, insulation, fireproof, tantera-drano ary rivotra.
Lamba fanoherana ny harafesina
Anti-harafesina Fiberglass lamba dia lamba fireproof vita amin'ny firakotra flame retardant polyurethane eo ambonin'ny lamba fiberglass miaraka amin'ny teknolojia coating rakotra. Izy io dia manana rindrambaiko isan-karazany sy fiasa amin'ny fanoherana ny hafanana avo, insulation, fireproof, tantera-drano ary rivotra.
Hafanana vita amin'ny volon-java-maniry lehibe
Heat voadidy lamba be fiberglass hafanana dia lamba fireproof vita amin'ny polyurethane mirehitra miaro amin'ny lelafo eo ambonin'ny lamba fiberglass miaraka amin'ny haitao fandrakofana. Izy io dia manana rindrambaiko isan-karazany sy fiasa amin'ny fanoherana ny hafanana avo, insulation, fireproof, tantera-drano ary rivotra.
Lamba fibre 3m
3m Fiber Cloth dia lamba tsy misy afo mirehitra vita amin'ny alàlan'ny polyurethane maharitra miaro amin'ny lelafo eo ambonin'ny lamba fiberglass miaraka amin'ny teknolojia fanosotra volo. Izy io dia manana rindrambaiko isan-karazany sy fiasa amin'ny fanoherana ny hafanana avo, insulation, fireproof, tantera-drano ary rivotra.
Lamba Fiberglass matanjaka indrindra
Pu Fiberglass Cloth Pu Strongest dia namboarina avy amin'ny lamba fototra fiberglass ary namboarina na nopetahana ny lafiny iray na ny andaniny roa tamin'ny silipo vita amin'ny silika mifangaro. Noho ny tsy fisian'ny fitrandrahana ara-batana vita amin'ny silika, dia tsy vitan'ny fampitomboana ny tanjaka, ny insulation thermal, ny fireproof, ny toetran'ny insulate, fa koa ny fanoherana ny ozone, ny fahanteran'ny oxygen, ny fahanterana, ny fahanteran'ny toetr'andro, ny fanoherana ny solika ary ny fananana hafa.
Lamba vita amin'ny polyester vita amin'ny Pu
Pu Coated Fiberglass Fabric Cloth dia fiberglass vita amin'ny haitao avo mihosin-polymer polyurethane teknolojia avo lenta. Ny lamba vita toy izany dia mahazaka hafanana hatramin'ny 180 ℃ mandritra ny fotoana fohy. Manana fanoherana mahery vaika izy ary fanoherana tsara ny menaka sy ny solvents. Misy lafiny roa / roa sosona polyurethane mifono lamba fiberglass misy loko sy sakany maro no misy.
Lamba Fiberglass Lamba
lamba mihosin-dra mifono lamba PU dia lamba mirehitra afo vita amin'ny alàlan'ny firakotra flur retardant polyurethane eo ambonin'ilay lamba fiberglass miaraka amin'ny teknolojia firakotra. Izy io dia manana rindrambaiko isan-karazany sy fiasa amin'ny fanoherana ny hafanana avo, insulation, fireproof, tantera-drano ary rivotra.
Clot Fiberglass, Fiberglass mifono akrilika, Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic, Lamba Fiberglass Aluminized, Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy, Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass,